Arday Caraysan oo Wadanka Pakistan Ku Dilay Nin Calmaani Ah Kadib Markii uu U Gefay Diinta Islaamka.
Saturday April 15, 2017 - 21:18:35 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Pakistan ayaa sheegaya in Arday wax ka barata mid kamida jaamacadaha waaweyn ee wadankaasi ay dileen Nin caayay Allaah Subxaanahu Watacaalaa.
Booliska ayaa sheegay in Arday caraysan ay dileen mid kamida Ardayda kadib markii uu Alle caayay, ardayga ladilay ayaa dhiganayay kuliyadda Saxaafadda ee Jaamacadda Maardaan ee dhacda waqooyiga Pakistan.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in Mishaar Khaan oo arday ahaa uu Baraha Bulshada ku faafiyay qoraal uu ku caayay Allaa SWTC kadibna arday muslimiin ah oo diinkooda uqiirooday ayaa gacanta ku dhigay.
Cabdi Wali Khaan oo kamid ah maamulka Jaamacadda Maardaan ayaa wakaaladda wararka Faransiiska u sheegay in boqolaal arday ah oo caraysan ay ku joog joogsadeen Ninka calmaaniga ah ee alle caayay ka hor intii aysan madaxa rasaas kala dhicin.
Mid kamid ah mas’uuliyiinta Booliska Pakistan ayaa xaqiijiyay in uu arkay Mishaar Khaan oo uu dhiig ka qubanayo waxaana jirkiisa laga dareemayay tacdiibin daran oo gaartay.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in mid kale oo kamid ah Ardayda calmaaniyiinta ah uu dhaawac culus gaaray waxaana loola cararay isbitaal.
Hay’adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in dadka calmaaniyiinta ah ay weeraro kala kulmayaan muslimiinta diinkooda uqiirooday kuwaasi oo wacad ku maray in ay dilayaan qof walba oo baraha Bulshada ku faafiya erayo ka dhan ah muqadasaadka muslimiinta.
Maamulaha Jaamacadda uu falkani ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in Mishaar Khaan uu caan ku ahaa faafinta afkaarta calmaaniga wuxuuna naceyb iyo takoorid kala kulmayay ardayda muslimiinta ee asaaggiisa ah.
R/wasaaraha Pakistan Nawaz shariif ayaa horay usoo saaray go’aamo ciqaab adag marsiinaya cid walba oo u gafta diinta Islaamka " arrinta caayda Alle waa fal cadawtooyo oo aan marnaba lacafin Karin..waa lagama maarmaan in ciqaab adag la marsiiyo kuwa falalka nuucaas ah ku kacaya” ayuu yiri Nawaaz Shariif.
Waxaa la sheegaa in dalka Pakistan lagu dilay 65 qof oo dhammaantood lagu helay kiisas nuucaan ah tan iyo bilaawgii Todobatameeyadii.